ချစ်သူတွေ လင်မယားတွေ အတူနေရာမှာ လုံးဝ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ. - APANNPYAY
/ ချစ်သူတွေ လင်မယားတွေ အတူနေရာမှာ လုံးဝ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ.
ချစ်သူတွေ လင်မယားတွေ အတူနေရာမှာ လုံးဝ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ.
သင့်အနေနဲ့ ချစ်တင်းနှီးနှောဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုရင် ဒီစာ ဖတ်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဘရာဇီးနိုင်ငံက သုတေသီတွေဟာ ချစ်တင်းနှီးနှောတဲ့ ပုံစံတွေထဲက အန္တရာယ်အရှိဆုံး ပုံစံကို ထုတ်ပြန်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ ကျားလိင်အဂါင်္ကျိုးသွားနိုင်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ သုတေသီတွေရဲ့ အဆိုအရ အောက်ပါ ပုံစံတွေဟာ အန္တရာယ်အရှိဆုံး ဖြစ်ပါသတဲ့။ သင့်အဖော်ကို မြင်းစီးခိုင်းမယ်ဆိုရင် သတိတော့ ထားပေါ့။ ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ ဆေးရုံက မှတ်တမ်းတွေအရ အထက်ပုံပါ ပုံစံတွေဟာ ကျားလိင်အဂါင်္ကျိုးသွားရတဲ့ အဓိက တရားခံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ သုတေသနမှာ ‘ကျွှန်တော်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အခါ အမျိုးသမီးအပေါ်က ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံဟာ အန္တရာယ်အရှိဆုံး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အမျိုးသမီး အပေါ်မှာ ဆက်ဆံတဲ့ အခါ အမျိုးသမီးဖြစ်သူက သူမရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ တောင်မတ်နေတဲ့ ကျားအဂါင်္ပေါ်မှာ ရှိနေပြီး ကျားအဂါင်္ကျိုးသွားနိုင်တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားရင် ရပ်လိုက်ဖို့ ခက်ခဲလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ကျားအဂါင်္ကျိုးသွားနိုင်တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားရင် အမျိုးသမီးအတွက် သိပ်အန္တရာယ်သိပ်မရှိလှ ပေမယ့် ယောကျာ်း လေးအတွက်တော့ မရှူနိုင် မကယ်နိုင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။’ လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆက်ပြီး ‘ယောကျာ်းက လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်ဦးဆောင်နေရင် ကျားအဂါင်္နာကျင်တာနဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်လိုက်လို့ ရပါတယ်’ လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ လိင်အဂါင်္ကျိုးပဲ့သွားတာ ပြဿနာလားလို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုသိထားဖို့က ကျားအဂါင်္ကျိုးသွားရင် အင်မတန် (အင်မတန်) နာကျင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျားအဂါင်္ကျိုးပဲ့သွားရင် နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ပန်းသေ၊ ပန်းညိုးဖြစ်နိုင်သလို ကျားအဂါင်္ကျိုးပဲ့ဖူးတဲ့ လူနာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ တစ်သက်လုံး အကျဉ်းတန်တဲ့ လိင်အဂါင်္နဲ့ နေသွားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တစ်သက်လုံး ချစ်တင်းနှီးနှောတဲ့ အခါ နာကျင်မှုကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီ လေ့လာမှုဟာ လူနာ ၄၄ ယောက်အပေါ် အခြေခံပြီး သုတေသနပြုထားတာမို့ သိပ်ပြီး မစိုးရိမ်ဖို့ တင်ပြလိုပါတယ်။
သငျ့အနနေဲ့ ခဈြတငျးနှီးနှောဖို့ ပွငျဆငျနတေယျဆိုရငျ ဒီစာ ဖတျခငျြမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ဘရာဇီးနိုငျငံက သုတသေီတှဟော ခဈြတငျးနှီးနှောတဲ့ ပုံစံတှထေဲက အန်တရာယျအရှိဆုံး ပုံစံကို ထုတျပွနျခဲ့လို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
အန်တရာယျဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ ကြားလိငျအဂါင်ျကြိုးသှားနိုငျတာကို ဆိုလိုတာပါ။ သုတသေီတှရေဲ့ အဆိုအရ အောကျပါ ပုံစံတှဟော အန်တရာယျအရှိဆုံး ဖွဈပါသတဲ့။ သငျ့အဖျောကို မွငျးစီးခိုငျးမယျဆိုရငျ သတိတော့ ထားပေါ့။ ဘရာဇီးနိုငျငံရဲ့ ဆေးရုံက မှတျတမျးတှအေရ အထကျပုံပါ ပုံစံတှဟော ကြားလိငျအဂါင်ျကြိုးသှားရတဲ့ အဓိက တရားခံတှေ ဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါ သုတသေနမှာ ‘ကြှနျတျောတို့ ရှာဖှတှေရှေိ့ခကျြအရ လိငျဆကျဆံတဲ့ အခါ အမြိုးသမီးအပျေါက ဆကျဆံတဲ့ ပုံစံဟာ အန်တရာယျအရှိဆုံး ဖွဈနိုငျတယျလို့ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ အမြိုးသမီး အပျေါမှာ ဆကျဆံတဲ့ အခါ အမြိုးသမီးဖွဈသူက သူမရဲ့ ခန်ဒာကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ တောငျမတျနတေဲ့ ကြားအဂါင်ျပျေါမှာ ရှိနပွေီး ကြားအဂါင်ျကြိုးသှားနိုငျတဲ့ ပုံစံ ဖွဈသှားရငျ ရပျလိုကျဖို့ ခကျခဲလို့ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလို ကြားအဂါင်ျကြိုးသှားနိုငျတဲ့ ပုံစံ ဖွဈသှားရငျ အမြိုးသမီးအတှကျ သိပျအန်တရာယျသိပျမရှိလှ ပမေယျ့ ယောကျြား လေးအတှကျတော့ မရှူနိုငျ မကယျနိုငျဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။’ လို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဆကျပွီး ‘ယောကျြားက လှုပျရှားမှုကို ထိနျးခြုပျဦးဆောငျနရေငျ ကြားအဂါင်ျနာကငျြတာနဲ့ လှုပျရှားမှုကို ရပျလိုကျလို့ ရပါတယျ’ လို့လညျး ဖျောပွထားပါတယျ။ လိငျအဂါင်ျကြိုးပဲ့သှားတာ ပွဿနာလားလို့ စိတျဝငျစားတဲ့ သူတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။
တဈခုသိထားဖို့က ကြားအဂါင်ျကြိုးသှားရငျ အငျမတနျ (အငျမတနျ) နာကငျြမှာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး ကြားအဂါင်ျကြိုးပဲ့သှားရငျ နောကျဆကျတှဲ အနနေဲ့ ပနျးသေ၊ ပနျးညိုးဖွဈနိုငျသလို ကြားအဂါင်ျကြိုးပဲ့ဖူးတဲ့ လူနာ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျဟာ တဈသကျလုံး အကဉျြးတနျတဲ့ လိငျအဂါင်ျနဲ့ နသှေားရနိုငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ တဈသကျလုံး ခဈြတငျးနှီးနှောတဲ့ အခါ နာကငျြမှုကိုလညျး ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ဒီ လလေ့ာမှုဟာ လူနာ ၄၄ ယောကျအပျေါ အခွခေံပွီး သုတသေနပွုထားတာမို့ သိပျပွီး မစိုးရိမျဖို့ တငျပွလိုပါတယျ။